Vaovao - Torohevitra momba ny famolavolana sy ny famolavolana ny plastika
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostria maoderina dia mihamaro hatrany ireo fitaovana plastika tena tsara. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra plastika koa dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany. Indrindra fa ny ampahany plastika marimarina kokoa no ampiasaina.
Andao hizara aminao ny torohevitra momba ny famolavolana sy ny famolavolana ny plastika.
Fanasokajiana ny ampahany plastika:
1. Famolavolana ny ampahany plastika marina
(1) Karazan-javatra plastika marina
A. Fizarana avo lenta azo refesina, toy ny: maotera maotera, kitapo kankana, visy, fitaratra.
Ireo ampahany marina ireo dia matetika ampiasaina amin'ny maodely fandefasana marina ny milina (toy ny mpanonta, fakan-tsary, mpanadio vacuum mandeha ho azy, robot, fitaovana elektronika, UAV kely, sns.). Mila fandrindrana mazava tsara, fivezivezena milamina, faharetana ary tsy misy tabataba.
B. faritra vita amin'ny rindrina manify:
Matetika, ny rindrin'ny faritra plastika dia latsaky ny 1.00mm, izay an'ny ampahany matevina.
Ny ampahany matevina amin'ny rindrina dia mety hahatonga ny haben'ny vokatra ho kely dia kely. Saingy sarotra ny hameno ny faritra vita amin'ny rindrina vita amin'ny plastika noho ny hatsiaka sy ny fanamafisana haingana. Ary ireo faritra matevina amin'ny rindrina dia tsy mahazaka ny herin'ny maty ary mamaky ny lavaka maty. Noho izany, ny famolavolana ny faritra matevina dia tokony misafidy fitaovana manana toetra mekanika tsara kokoa. Ary ny famolavolana antonony, toy ny hatevin'ny rindrina fanamiana, ny ampahany dia mety tsy ho rindrina loatra. Maty lalina, zoro lehibe kokoa. Ho an'ny ampahany somary manify dia ilaina ny milina fanorenan-tsindrona haingam-pandeha.
C. Fitaovana optika:
Ny faritra optika dia mitaky fahombiazana amin'ny fivezivezena mazava sy mazava tsara, ary koa ny fitoniana amin'ny refy ary ny fanoherana. Ohatra, ny fihodinan'ny masolavitra concave sy convex ampiasaina amin'ny projectors dia mitaky fahamendrehana sy fahamendrehana avo lenta.
Plastika avo mangarahara toy ny PMMA no ilaina. Mandritra izany fotoana izany, ny jiro optika jiro sasany dia mila manao tsipika tsara ihany koa eny ambonin'ny faritra mba hanazavana hazavana na hazavana na hanafoanana ny taratra aza.
D. Voninkazo avo lenta: Ny faritra misy glossa dia misy faritra optika, ary koa ny faritra hafa mitaky famaranana ambony (fitaratra). Ity karazana faritra ity dia be mpampiasa amin'ny vokatra elektronika mpanjifa, toy ny akorandriaka finday. Ny famolavolana an'ity karazana vokatra ity dia tokony handinika ireo fitaovana plastika misy tsiranoka tsara, famolavolana matevina ary teknolojia maty.
E. faritra plastika tsy tantera-drano
Vokatra elektronika sy elektrika maro no mitaky porofon-drano, toy ny solomaso / famantaranandro / elektronika miaramila, vokatra ivelany ary fitaovana misy tontolo iainana mando.
Ny fomba fampiasa amin'ny famonoana rano dia ny tombo-kase voahidy amin'ny faran'ny vokatra ivelany, toy ny fanalahidy mihidy, jacks mihidy, fantson-kase famehezana, fantsom-pandrefesana ultrasonika, sns.
F.IMD / IML (ravina-bobongolo, marika-bobongolo)
Ity dingana ity dia ny fametrahana ny sarimihetsika PET ao anaty lavaka famolavolana tsindrona ary hampidirina ao anaty teknolojia fanodinana iray manontolo ireo ampahany atsindrona, izay hifikitra mafy amin'ireo faritra plastika.
Ny vokatra IMD / IML dia manasongadina: mazava kokoa, stereoskopika, tsy mety lany; mangarahara ny lantom-baravarankely hatramin'ny 92%; ambonin'akanjo sy mahatohitra tohika mandritra ny androm-piainana maharitra; buoyancy ny vokatra manan-danja mandritra ny famolavolana tsindrona, ny fiainana manan-danja dia mety hahatratra in-1 tapitrisa mahery.
(2). Soso-kevitra amin'ny famolavolana faritra plastika marina
A. hatevin'ny rindrina fanamiana
Amin'ny famolavolana tsindrona, ny plastika dia ao anaty toetran'ny rano mandritra ny fotoana fohy, ary ny fitoviana amin'ny hatevin'ny rindrina amin'ireo faritra dia misy fiatraikany lehibe amin'ny hafainganana sy ny fitarihan'ny plastika. Ny hatevin'ny ampahany dia miova be, izay hitondra andianà kilema misy kalitao toy ny famenoana ny tsy fahafaham-po, ny fiovana, ny fihenan-danja, ny marika matevina, ny maratra matevina sy manify, sns. Noho izany, ny hatevin'ny rindrin'ny faritra plastika mazava dia tokony hitovy azo atao amin'ny famolavolana. Ny fiovan'ny hateviny dia tsy tokony ho lehibe loatra, ary ny fiolahana na ny fivezivezena amin'ny arc dia tokony hatao amin'ny fanovana.
B. tandremo ny fandrindrana eo anelanelan'ny ampahany ary manaova fepetra takiana amin'ny habe mety.
Mba hiantohana ny fifandimbiasana eo amin'ny ampahany dia matetika izahay no manome fepetra hentitra momba ny maha-izy azy ny faritra tsirairay. Fa ho an'ny faritra plastika dia manana ny fahaizany mivoatra sy matevina izy io. Indraindray, raha mbola mitombina ny firafitry ny firafitra, ny fanitsiana dia azo ahitsy amin'ny fifandraisan'ny faritra, noho izany ny fari-pitsipika marina dia azo avela tsara mba hampihenana ny fahasahiranana amin'ny famokarana. Degree.
C. fisafidianana fitaovana
Misy karazany maro ny fitaovana plastika, ary miovaova be ny fahombiazany.
Ho an'ny faritra plastika mazava tsara, ny fitaovana misy fihenan-tsakafo kely / fanovana / fahamendrehana tsara / fanoherana ny toetr'andro tsara dia voafantina arakaraka ny fitakiana fampiasana.
(a) ABS / PC misy fihenam-bidy ambany dia ampiasaina hanoloana ny PP amin'ny fihenan-dàlana avo, ary ny PVC / HDPE / LDPE miaraka amin'ny fihenan'ny ambany. ABS + GF dia ampiasaina hanoloana ABS.PC + GF amin'ny PC.
(b) Misafidiana PA66 + GF na PA6 + GF fa tsy POM na PA66 sy PA6.
D. diniho tsara ny fizotran'ny famolavolana.
(a) Ho an'ny akorandriaka matevina, boaty na kapila kapila, tsara kokoa ny mamolavola arc amin'ny alàlan'ny mikraoba sy ny fanamafisana ny atiny mba hisorohana ny fahasimbana.
b) Ho an'ny faritra manify manify, ny hatevin'ny ampahany dia tokony hitovy, ary ny faritra anatiny kosa tsy tokony hanana taolan-tehezana lalina na rafitra sarotra. Manolo-kevitra ny hampiasa milina fanorenan-tsindrona haingam-pandeha.
(c) Ny fantsom-panafody mafana na ny lasitra mihazakazaka mafana dia ampiasaina amin'ny ampahany betsaka mba hanitarana ny fotoana famenoana sy hampihenana ny adin-tsaina sy ny fiovana.
(d) ho an'ny singa roa misy singa roa vita amin'ny fitaovana roa, ny tsindrona loko roa sosona fa tsy ny tsindrona lakaoly no raisina.
(e) ny famolahana tsindrona mitsangana dia atolotra ho an'ny faritra misy tsofoka vy kely.
E. Manana toerana hanatsarana azy.
Amin'ny famolavolana ny ampahany plastika marina dia ilaina ny manombana ny fiviliana mety amin'ny famokarana ho avy.
(3) Fanamarinana ny famolavolana
Ny lasitra tsindrona dia manana vidiny lafo, fotoana maharitra ary vidin'ny fanovana be loatra, noho izany aorian'ny fahavitan'ny famolavolana ampahany dia ilaina ny manao santionany ara-batana hanamarinana ny endrika, hamaritana ny fahamarinan'ireo masontsivana famolavolana vokatra, mahita olana ary manatsara mialoha.
Ny famolavolana ny fanamarinana ara-batana dia tanterahina amin'ny fanaovana modely prototype. Misy karazany roa ny fanaovana prototype: fanodinana CNC sy fanontana 3D.
Ny fampiasana prototypes fanamarinana ara-batana dia mitaky fiheverana ireto lafiny manaraka ireto:
A.CNC ny vidin'ny famokarana prototype amin'ny ankapobeny dia avo kokoa noho ny fanontana 3D.
Ho an'ny ampahany lehibe dia ambany ihany ny vidin'ny fikarakarana CNC. Ho an'ny fitaovana sy ny toetra mekanika na ny fitsaboana eo ambonin'ny tany sy ny fitakiana fivoriambe dia asaina manodina ny CNC, mba ahazoana tanjaka mekanika tsara.
Ho an'ny ampahany kely sy ambany tanjaka dia ampiasaina ny fanontana 3-D. Haingam-pandeha ny pirinty 3-D, ary mora vidy kokoa ho an'ny ampahany kely habe.
B. Prototypes amin'ny ankapobeny dia afaka manamarina ny fitoviana misy eo anelanelan'ny ampahany, manamarina ny lesoka amin'ny famolavolana sy ny fanesorana ary manamora ny fanatsarana ny endrika. Na izany aza, ny prototype dia tsy afaka taratra amin'ny ankapobeny ny fepetra takian'ny teknika amin'ny famolavolana bobongolo, toy ny tsipika fandrefesana zoro / fihenan-tsasatra / fanovana / fanamafisana sns.
2. faritra vita amin'ny plastika marina
(1) famolavolana lasitra plastika (famolavolana bobongolo)
Ny bobongolo tena avo lenta no fanalahidy hanaovana ampahany marina. Ireto hevitra manaraka ireto dia mila harahina.
A. safidio tsara ny coefficient ny plastika amin'ny akora plastika. Ny toerana mety amin'ny ampahany amin'ny lasitra.
B. akora fototra bobongolo dia hofidina ho fitaovana vy misy fahamarinan-toerana / fanoherana / fanoherana harafesina.
C. ny rafitra famahanana bobongolo dia mampiasa Tsui mafana na mpihazakazaka mafana araka izay tratra, ka ny ampahany amin'ny ampahany amin'ny fitovian'ny maripana dia mampihena ny fiovana.
D. bobongolo dia tsy maintsy manana rafitra mangatsiaka tsara mba hahazoana antoka fa mihamangatsiaka ireo faritra ao anatin'ny fotoana fohy.
E. bobongolo dia tsy maintsy manana hidin-trano sy ny fitaovana fametrahana toerana hafa.
F. apetraka araka ny antonony ny toeran'ny famoahana ny mekanisma ejector, hany ka ny hery esaky ny faritra dia mitovy ary tsy simba.
Famolavolana lasitra sy famakafakana fitaovana lehibe (moldfow): Ampiasao ny rindrambaiko fanahafana ny famolavolana tsindrona mba hanahaka ny vokatry ny dingan'ny famolavolana tsindrona eo ambanin'ny masontsivana isan-karazany, fantaro mialoha ny lesoka amin'ny famolavolana vokatra sy ny volavolan'ny bobongolo mialoha, hanatsara sy hanatsara azy ireo ary hisorohana ny lesoka lehibe amin'ny famokarana bobongolo amin'ny be indrindra, izay afaka miantoka be loatra ny kalitaon'ny lasitra sy mampihena ny vidiny any aoriana.
(2) hamarinina lasitra.
Ny vidin'ny lasitra tsotra dia ambany lavitra noho ny an'ny lasitra famokarana. Ho an'ny ampahany plastika tsindrona dia ilaina ny manamboatra bobongolo tsotra hanamarinana ny famolavolana ny bobongolo alohan'ny hanaovana ny famolavolana famokarana ofisialy, mba hahazoana masontsivana hanatsarana ny famolavolana bobongolo ary hiantohana ny fahombiazan'ny lasitra famokarana.
(3) fanodinana bobongolo
Ny bobongolo tena avo lenta dia tsy maintsy asiana milina miaraka amin'ireto milina mazava tsara manaraka ireto.
A. fitaovana milina CNC mazava tsara
B. milina manjelanjelatra fitaratra
C. fanapahana tariby miadana
D. tontolo iainana mari-pana tsy miova
E. fitaovana fanandramana ilaina.
Ankoatr'izay, ny fanodinana bobongolo dia tsy maintsy manaraka ny dingana henjana ary miantehitra amin'ny mpiasa avo lenta hiasa.
(4) fisafidianana ny masinina manamboatra tsindrona
Fitaovana famolavolana tsindrona ireo faritra plastika avo lenta.
A. dia tokony hampiasa milina famolavolana tsindrona marina tsy misy mihoatra ny 5 taona androm-piainana.
B. madio sy milamina ny tontolon'ny orinasa.
C. ho an'ny faritra manify manify, tsy maintsy misy ny milina fanosorana haingam-pandeha haingam-pandeha.
D. loko roa na faritra tsy tantera-drano dia tsy maintsy misy milina fanoritana loko roa.
F. rafitra fanamafisana ny kalitaon'ny feo
(5) fonosana ho an'ny faritra plastika tsara
Ny fonosana tsara dia zava-dehibe hisorohana ny ratra, ny fiovana, ny vovoka amin'ny fitaterana, ny fitehirizana ny ampahany plastika marina.
A. faritra gloss avo tsy maintsy apetaka amin'ny sarimihetsika miaro.
B. ny faritra matevina vita amin'ny rindrina dia tsy maintsy fonosina am-paosy na sombin-javatra manokana, na sarahina antsy taratasy mba hialana amin'ny tsindry mivantana.
C. Ireo faritra mila ampitaina lavitra dia tsy tokony hapetraka malalaka ao anaty baoritra. Ny baoritra marobe dia tokony amboarina miaraka amin'ny stacks sy mpiambina.
Ny orinasa Mestech dia manana milina sy fitaovana amin'ny famokarana lasitra plastika sy famokarana bobongolo. Manantena izahay fa hanome anao serivisy fanamboarana lasitra sy famokarana ho an'ny faritra plastika marina.